merolagani - ट्विटरले ट्रम्पको ट्वीट झुठो भएको बताउँदै दियो चेतावनी
ट्विटरले ट्रम्पको ट्वीट झुठो भएको बताउँदै दियो चेतावनी
May 27, 2020 10:34 AM Merolagani
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको केही ट्वीटहरूलाई ट्विटरले पहिलोपटक फ्याक्ट चेक का लागि चेतावनीमा राखिदिएको छ ।
ट्विटरले मंगलबार ट्रम्पका दुईवटा ट्वीटमा यस्तो चेतावनी चिन्ह लगाएको हो ।
उक्त ट्वीटमा राष्ट्रपति ट्रम्पले लेखेका थिए, पोस्टल मतदानमा धाँधली हुने पूरै सम्भावना रहेको छ । मेल बक्सलाई चोरी गर्न सकिन्छ, यसका माध्यमबाट फर्जी मतदान गर्न सकिनेछ र फेरि त्यसलाई अवैध तरिकाबाट प्रिन्ट गरेर पनि पठाउन सकिनेछ ।
ट्विटरको यस कदमलाई राष्ट्रपति ट्रम्पले ट्विटरले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई दबाउने काम गरिरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
उक्त ट्वीटका लागि ट्विटरको नोटिफिकेशनमा लेखिएको छ, पोस्टल मतदानसँग सम्बन्धित तथ्यका बारेमा जान्नुहोस् ।
यद्यपी ट्रम्प आफ्नो प्रतिक्रियामा रोकिएनन् । उनले सोशल मिडिया प्लेटफर्म ट्विटरमाथि राट्रपति चुनावमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन् ।
‘ट्विटरले २०२० को राष्ट्रपति चुनावमा हस्तक्षेप गर्न गरिरहेको छ । उसका अनुसार, पोस्टल मतदानमाथि मेरो बयान भ्रष्टाचार र धाँधलीलाई बढावा दिनसक्छ, जुन गलत हो । उनीहरूले यो सिएनएन र अमेजन वासिङट्न पोस्टको गलत समाचारमा आधारित भएर गरिरहेका छन् ।’ ट्विटरमा ट्रम्पले भने ।
ट्वीटमा ट्रम्पले भने, ट्विटरले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने काम गरेको र राष्ट्रपतिका रुपमा त्यस्तो हुन दिन्न ।
नेता मन्त्री बने 'जुका' र व्यापारी मन्त्री बने 'झुसिले'?
राजनीति, राजनीतिकर्मीले मात्र गर्ने कि अन्य क्षेत्र या व्यवसायमा एक तहको सफलता हासिल गरेका मानिसहरूले पनि गर्ने ? यो बिषय पेचिलो बन्दै गएको छ । सिद्धान्त र सुद्धताको हिसावले राजनीति राजनीतिकर्मीले मात्र गर्नुपर्ने हो तर नेपालमा अन्य क्षेत्रबाट एक तहको पहिचान बनाएका मानिसहरु राजनीतिमा प्रवेश गरिसकेका छन् ।
आर्थिक विकास र रोजगारीको अवसर सृजना गर्नमा सुनचाँदी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्णः डा. पौडेल
Aug 03, 2021 02:59 PM
अर्थमन्त्रीले गरे सहकारी बैंकको चेक क्लीयरिङ्ग नहुने नियम खारेज गर्ने घोषणा, ऋण प्रवाहमा रहेको असमानता हटाउन पहल गर्ने
Aug 03, 2021 02:23 PM
इन्टरनेट सेवाप्रदायकले पोलभाडा तिरेनन्, कारवाहीका लागि टेलिकमले प्राधिकरण गुहार्यो
Aug 03, 2021 02:21 PM
लाइसेन्स आवेदन तथा ट्रायल परीक्षा खुलाउन सांसदको माग,कहिले खुल्छ ?
Aug 03, 2021 01:44 PM
मेरो शेयरमा समस्याको कारण मैलुङ खोला हाइड्रोपावरको आइपीओ भर्ने समय थपियो, मंगलबार साढे १ बजेसम्म भर्न पाइने
Aug 03, 2021 12:30 PM